သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ လွှတ်တော်အတွင်း မေးခွန်းများရှင်းလင်းဖြေကြားချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက် (အပိုင်း ၆) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ လွှတ်တော်အတွင်း မေးခွန်းများရှင်းလင်းဖြေကြားချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက် (အပိုင်း ၆)
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ လွှတ်တော်အတွင်း မေးခွန်းများရှင်း လင်းဖြေကြားချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက် (အပိုင်း ၆)
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မူဆလင်များအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏လွှတ်တော်အ တွင်း မေးခွန်းများ ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်အပေါ်သုံးသပ်ချက်”
ခြုံငုံပြောရလျှင် ပြဿနာ၏ ရင်းမြစ်မှာ အစိုးရမှ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံလို၍ ၁၉၈၂ခု၊ နိုင်ငံ သား ဥပဒေသစ်ဖြင့် မူလနိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ရုပ်သိမ်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အထက် မေးခွန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးများ ဖြေကြားသည်။ အလုပ်သမားခေါ် ကြော်ငြာများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး (မ၀တ)ရုံး ကြောငြာဘုတ်မှာ တပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမား အင်အား အနေ အထားပေါ် မူတည်ပြီး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး မှတ်ပုံတင်ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ပေးမည့် အကြောင်းရှင်း ပြသည်။ အားရ ဖွယ် ဖြစ်ပါသည။် သို့သော် အလုပ်သမားရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ငံသား စိစစ်ရေကတ် လိုသည်။ ထိုဒေ သ မူဆလင်များကို စိစစ်ရေးကဒ် မထုတ်ပေးခြင်းက အခွင့်အလမ်း ပိတ်သွားသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ခရီးသွားခွင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခွင့် ကန့်သတ် ထားခြင်းများမှာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ ကာ ကွယ်ရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး စသသည်တို့အတွက် ဟုရှင်းထား။ (၃-၉-၂၀၁၁ ကြေးမုံ) စည်ပင်သာယာ က ဆောက်လုပ်ခွင့် မပေးသည်ကို ဖြေရှင်းပေးမည့် အကြောင်းမပါ။ပညာရေး ကောလိပ် သင်တန်းဆင်း များကိုသာ အလုပ်ခန့်ကြောင်း၊ ယခင်က ကဲ့သို့အပြင် လူကို တိုက်ရိုက်မခန့် ကြောင်း ရှင်း ပြသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေးကလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လုပ်ထုံး လုပ်နည်း သာ ရှင်းပြသည်။ ပညာရေးကောလိပ်သင် တန်းဆင်းများ ကိုသာအလုပ်ခန့်ကြောင်း၊ ယခင် ကဲ့သို့အပြင်လူကိုတိုက်ရုက် မ ခန့်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ မူဆလင်များ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် မရှိ၍ ပညာရေး ကောလိပ် တက်ခွင့် မရ။ ဒေသခံ ကျောင်းဆရာအင်အားကိုမဖြည့်နိုင်။ မောင်းတော ဒေသမှာရပ်ဝေး မြို့များက သင်တန်းဆင်း ဆရာ၊ ဆရာမများခန့် ထားရာ ကျောင်းမတက် ဘဲ နေ၍ရ သည်။ လစာ အပြည့် ရသည်။ မည်သူမှအရေး မယူပါ။
ပြည်ထောင်စုလ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ၏ ရှင်းလင်းချက်ကပို၍ စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်း ထုတ်စရာလဲ များပါသည်။ တချို့ကိုထောက်ပြပါက-
(၁) မေးခွန်းမေးသူက မြန်မာမူဆလင်ဟု ဆိုသည်ကိုမကြိုက်၊ မြန်မာ မူဆလင်ဟု သုံးနှုန်းထားသူများ မှာ မောင်းတောဒေသတွင် နေဘင်္ဂါလီများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဟု ယူဆ ပါ သည်ဟုဆိုသည်။ နာမည် အရေး မဟုတ်ပါ။ ထိုသူတို့၏ အခွင့်အရေးသာ အရေး ကြီးသည်။ ယခင်ခေတ် အစိုးရမှတ်တမ်းများ၊ သမိုင်းစာအုပ် များမှာ ရခိုင်မူဆလင်/မြန်မာ မူဆလင်ဟု မှတ်တမ်းပါသည်ကို ဖျောက်၍ ရသည်မဟုတ်။လူပြောင်း မ ပြောင်းနိုင်သည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းက အမြဲတည်ရှိမည်။
(၂) ဘင်္ဂလားဒေရှ့်လူမျိုးနှင့်အစစအရာရာတူညီနေ၍ ခွဲခြားမရ ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ပ်တို့က ရခိုင်မှ မူဆလင်များနှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်သားများ အစစအရာရာ မတူကြောင်းများသာ သိရှိပါသည်။ ခါးဝတ် ပုဆိုးချည်ခြင်းက အစမတူပါ။ ဘာသာစကားလည်း မတူပါ။ ရခိုင်၊ဗမာ ကွဲပြားသလိုပေါ့။ ရခိုင်က ကုလား စကား ဘင်္ဂလားသားများကနားမလည်ပါ။ အရုပ်တူသည် ဆိုလျှင် အိန္ဒိယ တတိုက်လုံး တူသည် မဟုတ် လား။
(၃) နှစ်နိုင်ငံကြားကူးလူးဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ရာအစဉ်အဆက်ကလူများထိုးဖောက်ဝင် ရောက် ရောထွေးသည်ဟုဆို သည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘင်္ဂလားမှလာသူများ အလုပ် သမား များ သာဖြစ် သည်။ အလုပ်ရာသီကုန် လျှင် နေရပ်ပြန်သည်။ မြန်မာပြည်ရောက် အိန္ဒိယ အလုပ်သမားများနှင့် မတူပါ။အမြဲနေထိုင် သူများမှာ FRC ကိုင်ဆောင်ခဲ့သည်။ (စာ၃၀ရှု) လွတ်လပ်ရေးရပြီး ခေတ်နှစ်နိုင်ငံကြား လ၀က ဥပဒေများရှိနေ၍ ကုလား များ ၀င်လာ၊ အိမ်ထောင်ကျ ရောထွေးရန်မှာ ပြောသလောက်မလွယ်ပါ။ ကူးလူး ဆက် ဆံမှုရှိတိုင်း အမြဲ အခြေစိုက်နေထိုင်ရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် လ၀ကလတ်တလောဥပဒေရှိသည်။ဖမ်းပြီးပြည်နှင် ဒဏ်ပေးခံ ရဖွယ်သာရှိသည်။
(၄) နိုင်ငံခြားက ၀င်လာပြီး FRC မကိုင်ဘဲ နေလျှင်လ၀က ဥပဒေအရ အရေးယူရသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ် မတိုင်ခင်က ရခိုင်ပြည်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေသသည် ရာစုနှစ်ထောင်ချီ၍ နိုင်ငံတခုတည်းပါ။ ရခိုင်မှာ ကုလားရှိသလို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာလည်း ရခိုင်ရှိသည်။ ရခိုင်မှကုလားဦးရေထက် ဘင်္ဂလားရှိရခိုင်ဦးရေသည် ပို၍များသည်။ ထိုစဉ်ကပင် ရှိနေသူများအဖို့ တရားမ၀င်ခိုးဝင်၊ အိမ်ထောင်ကျသည်ဟုဆိုလျှင် မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဘင်္ဂ လားဒေရှ့်မှ ရခိုင်သည် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသားဖြစ်နေသလို ရခိုင်ရှိကုလား များ သည် မြန်မာနို င်ငံသားများအဖြစ် ရသင့်သည်။ ကုလားဖြစ်ရုံနှင့် မြန်မာ/ရခိုင်တို့ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင် ဟူသော အယူ အဆမှန်သလားဟု မေးခွန်းထုတ်ရမည်။ ရခိုင်ဘုရင်များ ခေတ်မှာတည်းက ရှိနေသောအထောက် အထား အခိုင်အမာများ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် ရေမြေသဘာဝကောင်းရာသို့ ၀န်ကြီးပြောသလို ခိုးဝင်ခြင်းမဟုတ်။ သူ့အကြောင်းနှင့် သူဟိုဘက်သည်ဘက်ရှိနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မိမိနှင့်လူမျိုးမတူ၍ ခိုးဝင်ရောထွေး သည်ဟု စွပ်စွဲရန် မသင့် တော်ပါ။
(၅) ၀န်ကြီးပြောသော နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးအပြီး ဟင်္သာစီမံချက်ဖြင့် လူပေါင်း၁၈၀၀၀၀ ပြန်လည် လက်ခံခြင်းနှင့် ၂၀၀၃မှ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ၂၃၀၀၀၀ကို ပြန်လည် လက်ခံခြင်းဆို သည့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံသားများ မဟုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်၍ မြန်မာလ၀ကရုံး မှတ်တမ်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန် သူများကိုသာ လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ မူလမြို့ရွာ၊ အိမ်များတွင် ပြန်လည်နေရာချ ထားပေးခဲ့ သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်ပေး သည်။ ၄င်းတို့ကြောင်း ရခိုင်က မူဆလင်များကို ဘင်္ဂ လားဒေရှ့်မှခိုးဝင်လာသူ ကုလားများနှင့် ရောထွေးသွားသည်ဟု မပြောနိုင်၊ လိမ်ညာ၍ မရပါ။ကြားမှ UNHHCR မှတာဝန် ခံပြီး ပြန်လည် ခေါ်ဆောင် နေရာချထား ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ကုလားတယောက် မှ ပြန်လည် လက်ခံ ရန်မရှိပါ။ ၀န်ကြီး၏ ရှင်းလင်းချက်ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာသတင်းစာ The New light of Myanmar မှာပြန်လည် လက်ခံသူ ဆိုသူများအား tookrefurge,given refuge ဟူသော အသုံးအနှုန်းများမှာ ဘင်္ဂလား နိုင်ငံသား များကို မြန်မာပြည်တွင် ခိုလှုံခွင့်ပေး သည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေ သည်။ ၄င်းသည် တချိန်ကျလျှင် ပြဿနာ ဖြစ်နိုင် သောအရေးအသားဖြစ် သွား နိုင်သည်။ ပြဿနာက ရှုပ်ထွေး သွားနိုင်သည်။ တဘက် စကားနားယောင်မှုနှင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဂတိ တရားရှိနေ လျှင်ပြ ဿနာရှင်း သွား မည်မဟုတ်ပါ။နှစ်ပေါင်းသုံး ဆယ်နီးပါးမည်သည့်မှတ်ပုံတင် မျှထုတ်ပေးခြင်း မရှိခြင်း သည်ပင်ပြဿနာမွေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကုလားအားလုံးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က ခိုးဝင် သူများဟု စွပ်စွဲရန် လွယ်ကူ သွားပေသည်။ လက်မှတ် တခုခုမပြနိုင်လျှင် သံသယဟု သတ်မှတ်မည်ဟု ၀န်ကြီး က ပြောသည်။ လက်မှတ်ကို အစိုးရထုတ်ပေးမှ ရနိုင်မည်။ မထုတ်ပေးဘဲ ယခုသံသယ သတ်မှတ်မည် ဆိုခြင်းသည် ဘောင်ကျမှုမရှိပါ။ ထိုဒေသရောက်ခဲ့သူ နစက၀န်ထမ်းများက ကုလားမြင်၍ အားလုံး ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က ၀င်လာသူဟု ပြောနေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ သူတို့က သမိုင်းမသိ၊ နယ်စပ်သဘာဝကို နားမလည်။ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးသာ ရှိရမည်ဟု သင်ပေးထားခံရသူ များသာဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က ၀င်လာ၍ သူတို့ အရေးယူနိုင် သည်လည်းမရှိ။ သူတို့လူကြီးများက သင်ပေးခြင်း ကိုအ မှန်ဟု ထင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကရခိုင်သမိုင်းအမှန်ကို မသိ။ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂ လား ဒေရှ့်နိုင်ငံ တခုတည်း အဖြစ်ရှိ ခဲ့ခြင်း ကို သူတို့ကမသိ။ရခိုင်ဘုရင်ပင်လျှင်ကုလား စကားပြောခဲ့ သည်။ ကုလားနာ မည်မှည့်ထားခဲ့သည်ကို သူတို့မသိ၊ ၀မ်းနည်းစရာလဲ ဖြစ်သည်။ ရခိုင်မှာ ရှိသော လူမျိုးစု အားလုံး၏ အနွယ်ဝင်များ ဘင်္ဂလားမှာရှိသည်။ မူဆလင်များ၏ အနွယ်လည်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာ ရှိနေမည်မှာ သဘာဝကျသည်။ လူမျိုးတူ ချင်းသံသယ ဖြစ်နေ သည်ဆိုခြင်းသည် သဘာဝ မကျခြင်းဖြစ်သည်။ တဘက်နိုင်ငံမှာ မြို၊ ခမီး၊ ဒိုက်နက်၊ သက်၊ မြန်မာ ကြီးစသည့်လူမျိုးစုများ သည်ဒီဘက်နိုင်ငံထက်ဦး ရေများစွာရှိနေသည်။
(၆) ဘင်္ဂလား ကုလားနှင့်ရခိုင်ကုလားခွဲခြားမရ၍ လူမှု၊စီးပွားဘ၀တခုလုံး ကန့်သတ် ထား ခြင်းပုံစံ(၄)ဖြင့် ခရီးသွားစေခြင်းတို့သည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ဒေသ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် အမျိုးသားရေး လိုအပ်ချက် အတွက်ဟု ဆိုသည်။ မည်သည့် အချိန်မှာ ခွဲခြား ရမည်နည်း။ အချိန်သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသ လား။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ယခုလို ကန့်သတ်ခွဲခြား ချုပ်ချယ် ထားခြင်းရှိနေ မည်ဟု ဆိုရပါ မလား။ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံ သားတ ဦး ချင်း အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးရန်ရှိသည်။
(၇) ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှနယ်စပ်ကျော်ခိုးဝင်သူသည်ဝန်ကြီးစာရင်းအရ တနှစ်တနှစ် ဆယ် ဂဏန်းမျှသာ ရှိသည်။ ဥပမာ 2011 ခုနိုဝင်ဘာက ထောင်က လွှတ်ပေးသော ဘင်္ဂလား သား (၃၅)ယောက် သာ ဖြစ်သည်။ ထိုဆယ် ဂဏာန်းများသော နယ်စပ် ကျွံသူများအတွက် သိန်းပေါင်းများ စွာသော ပြည်သူ များကို အခြေခံ အခွင့်အရေးများ ပိတ်ပင် ထားခြင်းကို တရားမျှတသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လား။ ခိုးဝင် သူသည် အခြေစိုက် နေထိုင်သူမဟုတ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခဏနယ်မြေကျွံသူ သာ ဖြစ် သည်။ ၀န်ကြီိးက လွှတ်တော်မှာ တင်ပြရာမှာလည်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသား ၂၀၀၅ခု၊ မှ ၂၀၁၂ခု အထိ ၂၇၈ ယောက်သာ အရေးယူဖမ်းဆီးခဲ့ ကြောင်းပါရှိသည်။ တနှစ်တနှစ် ဆယ်ဂဏန်းမျှသာ ဟုဆိုရပေ မည်။ လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်ကြောင့် ဒီဖက် ကမ်းရောက် သူ လည်းပါဝင်မည်။
(၈) အမျိုးသားရေး လိုအပ်ချက်ဆိုသည် သောင်းကျန်းသူရှိလျှင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး ဖြစ် သွားနိုင် သည်။ နိုင်ငံသားအားလုံး (ကုလားနိုင်ငံသားများ အပါအ၀င်)၏ အမျိုးသားရေး လိုအပ်ချက် မျိုး ဖြစ်သင့် သည်။ ဂျာမန်အမျိုးသားရေး လိုအပ်ချက်အရ ဂျူးလူမျိုးများကို နှိပ်ကွက်သတ်ဖြတ် ခဲ့ခြင်းကိုမှန် ပါသည်။ တရားသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ မည်လား။ ဂျာမနီ မှာ ရပ်ကွက် များတွင် Juden Rein ဂျူးသန့်စင်ပြီဟု ဆိုင်းဘုတ် တင်ခဲ့ ရသည်။ ယခုစစ်တွေမြို့တွင် ကုလားများကို ရခိုင်နှင့်ရောနှော မထားရ ခွဲခြားထားရ မည် ဟု ကြွေးကြော် ပြီးမြို့တွင်း မူဆလင် ရပ်ကွက်အားလုံး မီးရှိုခြင်းကို အဘယ့်ကြောင့်နိုင်ငံ တော် အစိုးရ က လက်ခံနေ သနည်း။
(၉) လ၀က၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ ဧည့်နိုင်ငံသားလက် မှတ်၊ နိုင်ငံ သား ပြုခွင့် လက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားသား လက်မှတ်တခုခု မပြနိုင်သူများကို ယာယီ သက်သေခံ ကတ်ပြား(အဖြူကဒ်) ထုတ်ပေးသည်။ နိုင်ငံသား သံသယအဖြစ် သတ် မှတ် မည်ဟု ရှင်းပြသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်နိုင် ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ မည်သည့် သက်သေခံ ကတ်များ ထုတ်မပေးဘဲ ထားခြင်းဟု သုံးသပ်ရသည် ။နိုင်ငံ သားများကို ယာယီ ကတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း ဟူသည် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သလား။၄င်းသည် ၁၉၄၉ခု လူဦးရေ မှတ်ပုံတင် နည်း ဥပဒေ ၁၃ (က) အရ အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ကတ် အစား ယာယီထုတ်ပေးသော ကတ်ပြားသာ ဖြစ်သည်။ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် နယ်များ မှ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်များ သိမ်းယူပြီး ယာယီကတ်များ လဲပေးခြင်း သည် ၀န်ကြီး၏ ရှင်းလင်းချက်အရ ဆိုလျှင်သံသယ ဟူစွပ်စွဲနိုင် ရန်နိုင်ငံ တော်က တမင်ကြံစည် ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နေသည်။ အထောက် အထား ဖျောက် ဖျက်က်ခြင်း ဖြစ်နေသည်။
(၁၀) တရားမ၀င် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်ကျ ရောထွေးခြင်းရှိခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ မည် သို့ပင်ဖြစ်နိုင် မည်နည်း။ ကုလားမှာ အမျိုးမတူ၊ ဇာတမတူ၊ အဆင့်မတူ စသည်များနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလေ့ မရှိ၊ လူမှုခွဲခြားမှု အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဓလေ့အရ မိန်းမကိုသာ ယောင်္ကျားများက ပေးရသည်။ ဘင်္ဂလား ကုလားများ ရခိုင်မှာ အိမ်ထောင် ကျလျှင် ရရှိခြင်းမရှိ။ပေးရသည်သာရှိမည်။ အဘယ်ကြောင့် ရခိုင် မှာလာ အိမ် ထောင် ကျမည်နည်း။ယုတ္တိမရှိပါ။
(၁၁) တဘက်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ခွဲခြား မရ၍ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အတွက် လူမှုစီးပွား ဘ၀ တခုလုံးကို ကန့်သတ်ခြင်း အမျိုးမျိုးပြု လုပ်ထားကြောင်း၊ ပုံစံ(၄)ဖြင့်ခရီး သွား စေ ကြောင်းများရှင်းပြသည်။ ခွဲခြားနိုင်သော နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ပြောဆိုသော စကားမတူသဖြင့် မည်သည့်ဒေသက လူချက် ချင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ် ဖဆပလ ခေတ်ဦးများက နိုင်ငံခြားသား အားလုံးကို FRC ကိုင်ဆောင်စေသည်။ ထောင် သောင်းချီ၍ ရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူများကို ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားတတ် (အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်) ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကုလားမှန်သမျှ နိုင်ငံခြားသားဟု မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။ တိုင်းရင်းသား ရှစ်မျိုးနှင့် မျိုးနွယ်စုသာ နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟူသော ဥပဒေမ ထွက်သေးပါ။ အမျိုးသား မှတ်ပုံကတ် ရှိသူသည် နိုင်ငံသား FRC ကိုင်သူသည်နိုင်ငံခြားသာဖြစ်သည်။လွယ်ကူသောကိစ္စ၊ရှင်းနေသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ရှုပ်အောင်လုပ်လို သော ဆန္ဒရှိနေ၍ယခုလိုနိုင်ငံသား သံသယ ဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်အန္တ ရှိသော “အသုံးအနှုန်း၊စကားလုံး“ဖြစ်နေပါသည်။ ရခိုင်မှမူဆလင်များ ကို နိုင်ငံသား အဆင့်လျှော့လိုသည့် နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ရုပ်သိမ်းလိုသည်။ နိုင်ငံမဲ့ ဖြစ်စေလိုသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် ကတ်ပြားမှ ထုတ်မပေးဘဲ နှစ်နှစ် ဆယ်ထား သည်။ ထိုဦးတည် ချက်ကို ရောက်ရှိနိုင် ရန် ဦးနေ၀င်း၏ မဆလ နှောင်းပိုင်းမှစ၍ ယနေ့အထိ ဥပဒေထုတ် ပြီးညွန်ကြားချက်များ ထုတ်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများအား သင်တန်း ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ ဤသို့ ပြုခြင်းသည် နိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်၊ အမျိုးသားရေးလည်း မဟုတ်ပါ။ အစွန်းရောက် သူတစ်စု စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မလိုတမာတိုင် တန်းမှုကို ဘက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရ ဆိုသည်ဘက်လိုက်မှု မရှိစေရပါ။ အဂတိတရားမရှိစေရပါ။ မင်းကျင့် တရား ဆယ်ပါးဟူ၍လည်း ကြားဘူးပါသည်။ တရားမျှတလျှင် သံသယပြဿနာ ပျောက် သွားမည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မူဆလင်များ ကိုမြို့နယ်အလိုက် အနှစ်နှစ် ဆယ် ကျော် အကျယ်ချုပ် ထားခြင်းသည် လုံလေက်သွားပြီဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမဟုတ်၊ အသက်ရှိသော လူသား များဖြစ်သ ဖြင့် ဆက်လက် ဖိနှိပ်နေရန်မှာ မသင့်တော်ပါ။ ယခင်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြ၍ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ထုတ်ပေးပါက အလိုအလျောက် ဘင်္ဂလား ကုလားနှင့် ခွဲခြား ပြီးသားဖြစ် သွားမည်။ ရခိုင်မှာ မူဆလင် လူဦးရေ စွပ်စွဲသလို တိုးပွားလာခြင်းမရှိပါ ၁၉၇၃ ခုနှစ် သန်ခေါင်းစာရင်း ဦးရေ အချိုးနှင့် တွက် လျှင် ဦးရေ၂၅%လျော့နည်းနေ သည်။ ဖိနှိပ်၊ ကန်သတ်မှု ဒဏ်အရပ်ရပ် မခံနိုင်၍ အခြားနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးခြင်း ကြောင့် လျော့နည်း သွားခြင်းဖြစပါသည်။ လူမျိုးတမျိုး၏ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေးကို တခြား လူမျိုး တမျိုးက ကောက်ခံရ သည်ဟု ဆိုခြင်းသည် ဘယ်မှာမှ မရှိသော စံ ပေတံ ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးစုံ ရှိသော ရခိုင်ဒေသမှာ လူမျိုးတမျိုးကို ထင်ရာဆိုင်းနိုင်သော အခွင့်အရေးပေး ထားခြင်း၊ ဘေးမဲ့လွှတ် ထားခြင်း သည် နိုင်ငံတော်တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရနိုင်ပါ။ ယခု ရခိုင် အရေးအခင်းအတွင်း တပ်မတော်သား များ နောက်ထပ်ပို့ ခြင်းမှာ စစ်တွေလေ ဆိပ်နှင့် ရခိုင် အမျိုးသားများကိုကာကွယ်ရန်ဟု နိုင် ငံတော်အဆင့် လူကြီးတို့ကပြောပါသည်။ မျှတမှုရှိသော အသုံး အနှုန်း မဟုတ်ပါ။
This entry was posted on January 5, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၇ [ထေရဝါဒ အိန္ဒိယက ကွယ်ရခြင်း တရားခံ- ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလေးစားပါ ]
ဗိုလ်မှုးဘရှင် ၉၈ နှစ်မြောက် ကျင်းပမည့် ရက် အတည်ဖြစ် →